Thibaut Courtois oo ka hadlay mustaqbalkiisa, miyuu ku biiri doonaa kooxda Real Madrid? – Gool FM
Thibaut Courtois oo ka hadlay mustaqbalkiisa, miyuu ku biiri doonaa kooxda Real Madrid?
Dajiye July 15, 2018
(Chelsea) 15 Luulyo 2018. Goolhaayaha xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea Thibaut Courtois aya wxuu ka hadlay sida uu ka yeeli lahaa mustaqbalkiisa kadib markii ay koobka aduunka 2018 ay kaga dhameysteen booska saddexaad.
xulka qaranka Belgium ayaa guul 2-0 ah ka gaaray dhigiisa England kadib markii ay xalay wada ciyareen kulankii lagu xaqiijinayay booska saddexaad ee koobka aduunka 2018 ee caawa lagu soo gaba gabeyn doono dalka Russia
hadaba Thibaut Courtois ayaa kadib ciyaarta kala hadlay saxaafada sida uu noqon doono mustaqbalkiisa kadib koobka aduunka 2018.
“Hada waxaan la hadli doonaa wakiilkeyga, si aan u ogaano fursadaha jira, dhamaan fursadaha jira waxay noqon doonaan kuwo ii furan, sidoo kale waxaa suuragal ah inaan sii joogo kooxda Chelsea”.
“Dadka had iyo jeer waxay ka cabanayaan ciyaartoyda aan u hoggaansameynin heshiisyadooda, laakiin waxaa laga yaabaa inay sameeyaan sidaas”.
Dhinaca kale Romelu Lukaku ayaa si toos ah ugu soo daabacay bartiisa Inistigram-ka kadib kulankii xalay su’aal uu la wadaagay Courtois ee ahayd, “Halkee ayaad u socotaa?” goolhaayaha xulka Belgium ayaa wuxuu jawaab kaga dhigay “Gurig, England, London”.
Si kastaba Thibaut Courtois ayaa xiliyadii lasoo dhaafay oo idil si xoogan lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono kooxda reer Spain ee Real Madrid, laakiin jawaabta uu bixiyay ayaa suuragal ka dhigi karta inuu sii joogo kooxda reer London ee Chelsea.
Balse waxaa si kale loogu fasiri karaa arintan inuu doonayo dib ugu laabashada magaalada London si u u soo macsalaameeyo jamaahiirta iyo kooxda kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid.
“Luca Modric wuxuu u ciyaaray Koobka Aduunka sida qoob ka ciyaarka”… Ricardo Kaka
LAYAAB: Cristiano Ronaldo oo Juventus u ahayd qorshaha labaad kahor inta uusan ku biirin, isagoo doonayay inuu u dhaqaaqo kooxdan